African Green Pigeon - Izinyoni - Iningizimu Afrika
Green Pigeon (Treron calva)
Ngenhla leli juba libonakala ngathi lingumbala oluhlaza satshani ohlangene nombala ongwevu. Amathanga namaphiko ayi a-mauve umbala. Izimpaphe zale nyoni eziluhlaza njengotshani ziyenza ingabonakali uma ihlezi phezulu ezihlahleni. Inomlomo obomvu omphophe phambili. Izinyawo nazo zibomvu.
Idla izithelo, ikakhulukazi ama-figs.
Ama-green pigeon avame ukuzalela amaqanda kusukela kuNhlaba kuze kube wuNhlolanja. Aye akhe zidleke ngezinti namahlamvu futhi akhela ezihlahleni ezinamhlamvu amaningi. Zizalela iqanda elilodwa noma amabili ngesikhathi.
Amachwane abonakala emuva kwezi nsuku eziyi-13. Inyoni eyinkunzi yiyo eye iphinde iyocinga izinti bese iziletha esidlekeni. Insikazi yiyo ekhetha indawo lapho efuna kwakhiwe khona isidleke. Lezi zinyoni ziyabambisana kanti akujwayelekile ukubona i-pigeon ihamba yodwa.
Yizinyoni ezingenamahloni, futhi ungazithola zingamaqembu amancane. Zidlela ezihlahleni, futhi zibhabhazelisa amaphiko ukuze zibhalanse kahle. Ukundiza kwayo kuyashesha futhi kuqondile.
Kuma-woodland, ikakhulukazi ezindaweni eziseduze komfula.
Ama- green pigeons atholakala eZimbabwe, enyakatho-mpumalanga neBotswana, enyakatho yeNamibia, eNozambique, eNorthern Cape naseMpumalanga eNingizimu Afrika.